काठमाडौं । बिहीबारदेखि नेपालको पूर्वी क्षेत्र हुँदै शुरु भएको मनसुन आज मध्यक्षेत्रसम्म आइपुगेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पूर्वी नेपाल हुँदै भित्रिएको मनसुन विस्तारै पश्चिम क्षेत्रसम्म फैलिने क्रममा छ। महाशाखाका अनुसार वर्षा हुने गतिविधि अव क्रमशः बढ्दै जानेछ । ‘अबको एक/दुई दिनमा मनसुन पश्चिम क्षेत्रसम्म पुग्ने छ,’ मौसमविद् शान्ति कँडेलले भनिन्। आज देशको […]
ओली-प्रचण्ड साँढे तीन घण्टा लामो भेटवार्ता : के भयो बालुवाटार छलफलमा ?
काठमाडौं : पार्टीको आन्तरिक मतभेदका कारणा सार्वजनिक टिप्पणीमा उत्रिन थालेका नेकपाका दुई अध्यक्षाबीच साँढे तीन घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्षा ओलीको निमन्त्रणामा बालुवाटारमा भएको बैठकले पार्टीभित्रको असन्तुष्टी साम्य पार्ने समझदारी गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। सचिलायका अनुसार दुई अध्यक्षहरुको भेटवार्ताबाट सचिवालय बैठकको एजेण्डा तय भएको छ। शनिबार बिहान ११ बजे […]
काडमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रि गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्न नसुहाउने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले वर्तमान सरकारको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा पहिला आफ्नो इतिहास सम्झन कांग्रेसलाई सुझाव दिए। ‘कुनै समय कम्युनिष्ट […]
धादिङ जीप दुर्घटना अपडेट : पाँच जनाको ज्यान गयो, १० जना घाईते (मृतकको सूचीसहित)
धादिङमा बोलेरो जीप दुर्घटना, हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ, भने १० जना घाईते भएका छन । धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नं ६ बाँझगाउँमा आज(शुक्रवार) बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको हो । गल्छी गाउँपालिका वडा नं ५ को सिरुवारीबाट बैरेनी तर्फ जाँदै गरेको बा १८ च ९४०८ नम्बरको जीप अनियन्त्रित भई पल्टिएको […]
परिचयपत्र पाएका हलियाको यस्तो विजोग : हलिया परिचयपत्र बुझेर पछुताउँदै जङ्गे भुल
डोटी । पुस्तौँदेखि हलिया बस्दै आएका डोटी जिल्ला सायल गाउँपालिका-१ छपाली बिनेवाडाका ५६ वर्षीय जङ्गे भुल विसं २०६५ मा हलियामुक्तिको घोषणा भएपछि खुशी भएका थिए । उनले सरकारबाट केही राहत पाउने आस गरेका थिए, रोजगारीको पनि आस गरेका थिए थिए। तर उनका लागि त्यो मुक्ति अहिले सजाय बनेको छ । उनले पाएको हलिया परिचयपत्र पनि […]
लमजुङ । लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहर नगरपालिका ८ शेराकुनामा एउटा घरमा आगलागी भएको छ । आगलागीबाट बेसीशहर नगरपालिका ८ का नारायणबहादुर सुर्यालको जस्ताले छाएको दुई तले कच्ची घर पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको हो । आगलागी हुँदा १४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । बिहीबार दिउँसो साँढे १ बजे आगलागी भएको खबर पाउने […]
५ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारी नीतिमा यूवाकै अविश्वास : जेठ महिनामा मात्र ४३ हजार रोजगारीका लागि उडे
काठमाडौं। बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने सरकारी घोषणालाई चुनौती दिँदै गत जेठ महीनामा ४३ हजार युवा विदेश उडेका छन्। स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने गरी सरकारले ‘प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम’घोषणा गरेपनि जेठमा ४३ हजार ६५४ युवा कामको खोजीमा विदेशिएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, जेठमा ४० हजार ९०१ पुरुष र दुई हजार ७३५ महिला श्रम स्वीकृति […]
गुठी पछि अरु विधेयक फिर्ता गर्न सरकारमाथी दवाव : संसदमै कांग्रेसले गर्‍यो चार विधेयक फिर्ताको माग
काठमाडौं । हरेकजसो विधेयकमा विवादित बनेको सरकारले दवावमा गुठी विधेयक फिर्ता लियो। तर,सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएसँगै त्यसलाई नै आधार बनाएर थप ४ विधेयक फिर्ताका लागि दवाव सुरु भएको छ। अन्य चार विधेयक गुठी भन्दा अगाडी नै तिब्र विवादित बनेका थिए। अहिले गुठी विधेयक जस्तै ती विधेयक पनि फिर्ता लिन दवाव बढेको हो। प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा […]
नेपालगंज : लामो समयको पर्खाइपछि नेपालगंजको बहुप्रतिक्षित ठूलो योजना भित्रको वाटरपार्क निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। ‘वाटरपार्क निर्माण भएपछि हाम्रो नेपालगञ्जको पहिचान नै बदलिन्छ,’ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले भने, ‘ आर्थिक समृद्धि र विकासमा यो कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।’ वाटरपार्कको कूल ६५ बिघा क्षेत्रफलमध्ये १० बिघा तलाउले ओगटेको छ। तलाउलाई नौका विहार र पौडी […]
लक्ष्मण ढुंगाना,बाँके । बाँकेमा लागु औषध कारोवारी धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन । प्रहरीले लागुऔषध विरुद्ध नियमित चेकजाँजमा कडाई गरेपछि दैनिक जसो लागु औषध कारोवारी पक्राउ पर्ने गरेका हुन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार प्रहरीले आ.व. २०७५÷०७६ को हालसम्म लागुऔषध कारोवारसंग सम्वन्धीत २ सय २१ मुद्दा दर्ता गरेको छ । २०७४ मा १ सय […]